Toriteny 9 febroary 2014 | FJKM Amboniloha
Toriteny 9 febroary 2014
Salamo 119 : 41-48 / Jaona 5:39-47 / Asan’ny Apostoly 18:24-28
“… Dinihonareo ny Sorarta Masina, ataonareo fa ao aminy no ahitanareao fiainana, nefa tsy mety manatona ahy ianareo …” Jaona 39:47
Alahadin’ny Baiboly ny andro anio. Tsara ny manamarika fa ny Baiboly dia tsy boky nosoratan’olona iray toy irony Roman irony fa fitambarana boky 66 izay manambara an’I Jesoa kristy.
Ity perikopa ity dia tsindrina manokana fa natao ho an’ny olona efa Kristiana mahalala tsara an’Andriamanitra sy ny momba Azy. Mihevitra tokoa ny Kristiana fa ny fahaizana ny Baiboly na ny fahazotoana mandinika azy io no ahazoana fiainana.
Ahitsin’ny Tenin’Andriamanitra anefa isika fa diso lalana ary very fotoana raha mitoetra ho fahalalana fotsiny ihany ny fandinihana ny Baiboly; na koa mihevitra fa ampy ny fanarahana ny fombam-pivavahana toy ny fanatrehana fotoam-bavaka tsy tapaka, ny fandoavana adidy, ny batisa sns …
Ny zavatra takina amintsika dia ny hanana an’I Jesoa Kristy ao anatin’ny fo ; araka ny ambaran’ny Soratra Masina manao hoe “ataonareo fa ao aminy no ahitanareo fiainana nefa tsy mety manatona Ahy ianareo …”
35 sm matetika no mety tsy ahatafiditra ny olona iray ao amin’ny fanjakan’ny lanitra,
ahoana hoy ianao ?
Ny Tenin’Andriamanitra izay ren’ny sofina dia miditra ao an-tsaina ary manjary ho fahalalana, misy ny mampiditra izany ao am-po fa misy kosa ireo izay mampiasa izany ho haren-tsaina fotsiny ihany ka mitarika ho amin’ny fahaverezana.
Hafatra : Fahamarinana avy amin’Andriamanitra ny finoana an’I Jesoa, ka tsy ny fahalalana ny Tenin’Andriamanitra no takina amintsika fa ny famohanao ny fo itoeran’I Jesoa Kristy.
Mahita tsirony amin’ny fandraisana ny Tenin’Andriamanitra ve aho ? Raha eny dia mifalia fa efa ao anatinao Jesoa, raha tsy dia taitra loatra kosa, aoka mba handini-tena .
Sahy mijoro ve aho amin’ny sehatra rehetra misy ahy handresy lahatra fa Jesoa no Kristy ?
Ho an’Andriamanitra ny voninahitra. Amen !
RAKOUTH Bakolimalala , Mpiandry
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 13 février 2014